ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: သိလိုတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဂူဂဲလ်ကို မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့်သဘော www.google.com.mm ဆိုပြီး သုံးစွဲနိုင်ပြီ (အင်တာဗျူး)
သိလိုတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဂူဂဲလ်ကို မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့်သဘော www.google.com.mm ဆိုပြီး သုံးစွဲနိုင်ပြီ (အင်တာဗျူး)
ပြည်တွင်းပြည် မြန်မာတွေကြားမှာ အင်မတန် ရေပန်းစားတဲ့ သိလိုတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ ဂူဂဲလ်ကို မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့်သဘော www.google.com.mm ဆိုပြီး သုံးစွဲနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ် ဥက္ကဌ မြန်မာပြည်ကို အလာမှာ အခုလို သုံးစွဲခွင့် ရလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သုံးခွင့်ရတယ်ဆို... သုံးရတာ ဘာတွေ ထူးခြားမှာပါလဲ။ မန္တလေး အခြေစိုက် အယ်လ်ဖာ ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီရဲ့ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးရဲမြတ်သူကို ဘီဘီစီက မေးထားပါတယ်။
အစိုး၇က အင်တာနက် မြန်နှုန်းတွေ နှေးအောင် တမင်
လုပ်ထားတာပါ ၊ ပြည်တွင်း AFFAIR တွေ ပြည်ပကို လွယ်လွယ်နဲ. သတင်း မပို.
နိုင်အောင်ပါ ၊ နောက်ပြီး RED LINK လို ELITE လို ခ၇ို
နီ တွေရဲ. အကျိုးစီးပွား ကို ပံ.ပိုးပေးတာလည်း ပါတယ် ၊
၂၀၀၂ ၊ ၂၀၀၃ တုန်းက အင်္ဂလန် ပ၇ီးမီးယါး လိဂ် ဘောလုံး ပွဲ တွေ INDO , THAI , CAMBODIA,
၈ ပေ စလောင်းတွေက free လွှင်.တော. စစ်အစိုး၇က
အင်္ဂလန်ဘောလုံး အဖွဲ.ချုပ် free လွှင်. တာ ကိုကန်.
ကွက် ပိတ်ပင်ခဲ. တာပါ ၊